Hlola i-New Zealand - World Tourism Portal
Hlola i-New Zealand
Okufanele ukwenze eNew Zealand
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni waseNew Zealand
Bukela ividiyo ekhuluma ngeNew Zealand
Hlola iNew Zealand izwe elihle kakhulu lemvelo elihle kakhulu: izintaba ezixutshikile, umhlaba odlayo, imililo emaphethelo, amachibi agcwele izikebhe, imifula evuthayo, amabhishi amahle nezindawo ezigcwele intaba-mlilo. Lezi ziqhingi zingenye yezinhlobonhlobo zomhlaba ezingafani nalutho, ezihlalwa yizinyoni ezingenazindiza ezingabonakali kwenye indawo njengepaki ebusuku, elihlakazayo elibizwa nge-kakapo ne-kiwi. ikiwi akuyona eyodwa kuphela yezimpawu zezwe - ezinye ngokuba yhlamvu lwesiliva ne-koru - kodwa futhi negama elithi New Zealanders zivame ukuzibiza.
Lezi ziqhingi zinabantu abambalwa, ikakhulukazi kude neNorth Island, kodwa zitholakala kalula. Kunezindawo zokuvakasha zesimanje ezikhazimulayo, futhi amanethiwekhi okuhambisa athuthukiswa kahle anezikhumulo zezindiza ezweni lonke nemigwaqo emikhulu egcinwe kahle. INew Zealand ivame ukungezelela imvelo eguqukayo emvelweni: iyikhaya lokuqala le-jet-sikears ngokusebenzisa amagalari angajulile, futhi ukugoqa noma yini ephakeme ngokwanele ukujabulisa.
Isiko leMāori liyaqhubeka nokudlala indima ebalulekile empilweni yansuku zonke nophawu lukahulumeni nolwezinhlangano elinamathuba amaningi abavakashi okuqonda nokuhlangabezana nomlando womabili futhi izinhlobo zanamuhla zokuphila kweMāori.
INew Zealand ibizwe ngokuthi “Izwe lakhe uqobo"Futhi"IPharadesi lasePacific"Kusukela kuma-1800s akuqala.
Kuqukethe iziqhingi ezimbili eziyinhloko - ngomqondo oqanjwe iNyakatho yesiqhingi kanye neSouth Island kanye nezinye eziningi ezincane eSouth Pacific Ocean, lesi siqhingi sikhulu i-1,600km (1,000 mi) eningizimu empumalanga ye Australia.
INew Zealand iyisizwe sesihlanu esikhulu kunazo zonke emhlabeni esiqhingini, indawo yaso edlula kuphela i-Australia, Indonesia, Japan kanye ne Philippines; Imayini yase-NZ Exclusive Economic Zone (i-EEZ) yasolwandle ikhulu ngokuphindwe kayishumi nanhlanu, yedluliswa kuphela yi-Australia ohlwini olwedlule.
Njengoba kunabantu abacishe babe yizigidi ezingama-4.5 ezweni elikhudlwana kune-United Kingdom, izindawo eziningi zihlala zilinganiselwe.
Qiniseka ukuthi uvumela isikhathi esanele sokuhamba eNew Zealand. Amabanga makhulu kunokuba ucabanga futhi nemigwaqo eminingi ihamba ogwini futhi ihamba ngezintaba (ikakhulukazi eSouth Island). Kuyavuza ukuvakasha amasonto amathathu noma amane esiqhingini esikhulu ngasinye, yize ngokuqinisekile ungabona ezinye ezinhle kakhulu ngesikhathi esincane.
Auckland, enabantu ababalelwa ezigidini ezingama-1.5, idolobha elikhulu kunawo I-Polynesia.
INew Zealand yaba umhlaba wokugcina obalulekile emhlabeni wokuxazululwa ngabantu. Ama-East Polynesians afika eNew Zealand cishe ngeminyaka eyi-700 eyedlule ochungechungeni lwemikhumbi emikhulu yezikebhe zasolwandle ukuqala kokuxazulula lokho okwaba yiNew Zealand - eminye iminyaka eyi-46,000 ngemuva Australia.
INew Zealand inesimo sezulu esishisayo - ubusika bubanda impela eningizimu yeSiqhingi kodwa imnene enyakatho yeNorth Island. Uhlobo lwendawo, imimoya evamile kanye nobude bezwe kuholela ekuqhathaniseni okukhulu kwesifunda.
Nazi izindawo ezivelele kakhulu:
Auckland - "Idolobha Laseyili", indawo enkulu kunazo zonke, enabantu abangaphezu kwesigidi endaweni yedolobha
IHamilton - i-128 km (i-80 km) eningizimu ye-Auckland nenhlokodolobha enamaqabunga iWaikato ecebile evundile osebeni loMfula omkhulu weWaikato
I-Rotorua - edume ngesiko lamaMahori, geysers namachibi amahle asishisayo.
INapier - "I-Art Deco inhloko-dolobha ye-NZ", ichithwe ukuzamazama komhlaba e-1931 futhi yakhiwa kabusha ngalesi sitayela. Idume njengesifunda sewayine, ikakhulukazi isitayela seBordeaux reds kanye neCape Kidnappers. Indawo yokudlala yegalufa eyaziwayo, izindawo zokuzalela i-gannet nendawo engcwele yezilwane zasendle.
Wellington - inhlokodolobha kazwelonke, eyaziwa ngokuthi "The Windy City" - IPhalamende, i-Beehive kanye nenhle, mahhala ngokuphelele futhi kuyajabulisa UTapa
Nelson - ophephile futhi onobungane, onamahora aphezulu kakhulu okukhanya kwelanga aseNew Zealand, ezungezwe indawo ebushelelezi nasentabeni, amapaki amathathu esizwe, izivini namasimu ezithelo. Yaziwa kahle ngesiko layo elichumayo lobuciko kanye nokudla okuhlukahlukene okugcizelela umkhiqizo wasendaweni.
IChristchurch - kuseyi- “Garden City” kanye ne- “Air Gateway” eya e-Antarctica ngisho nangemva kokuzamazama komhlaba kwamuva nangokuqhubekayo. Indawo yesithathu ngobukhulu ngobukhulu ne-International Airport Airport
I-Queenstown - inhlokodolobha ye-adrenalin ne-adventure yezwe, lapho ungahamba khona, ukushushuluza, gxuma ngokungena, jet-isikebhe, futhi uzijabulise kokuqukethwe kwenhliziyo yakho
UDunedin -Edinburgh waseNingizimu ”, uyaziqhenya ngayo Scotsamagugu, ikoloni yaseNingizimu ye-Albatross, kanye namathrekhi wayo wokunyathela amangalisayo; konke ngaphakathi kwedrayivu emfushane evela ku-CBD
I-Abel Tasman National Park - Amabhishi anesihlabathi segolide, i-kayaking ne-Abeli ​​Tasman Coastal Track
I-Aoraki Mount Cook National Park - amathuba amaningi okuhamba ezintabeni kanye nentaba ephakeme kakhulu yaseNew Zealand
Bay of Islands - indawo enhle eNorth Island enokubaluleka komlando
ICoromandel Peninsula - ugu olugudle ugu olunamabhishi amaningi namathuba okuhamba izintaba ihora elilodwa nohhafu ukusuka e-Auckland
IMilford Sound - isishoshovu esihle eFiordland National Park
I-Taupo - imisebenzi yokudoba ama-trout kanye ne-adventure enkabeni yeNorth Island
I-Tongariro National Park - izintaba-mlilo ezintathu, izikebhe ezimbili kanye nenye yezintaba ezithandwa kakhulu ezweni
IWestland National Park - ikhaya leFranz Josef nePox Glaciers
I-Wanaka - amachibi amabili amahle kanye nesango eliya eMt Aspiring National Park, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo, umhlanga
Ukufika kuthathwa ngendiza noma ngezikhathi ezithile olwandle (imikhumbi ehamba ngomgwaqo iye e-Auckland, eWellington, e-Nelson noma eChristchurch kanye ne-yacht yangasese eyenzeka ngezikhathi ezithile. Kusenokwenzeka nje ukubhuka noma ukushayisa abagibeli abajwayelekile).
INew Zealand iyindlela ende ukusuka kwenye indawo emhlabeni, ngakho kubavakashi abaningi, okuwukuphela kwendlela esebenzayo yokungena New Zealand kungukuba yindiza. Ngisho izindiza ezifushane kakhulu phakathi kwe-Australia neNew Zealand zithatha amahora we-3.
Ukuze uthole ithrafikhi, amasango aphesheya kwezwe ase-Auckland, Christchurch, Wellington, Queenstown naseDunedin. Izinsizakalo ze-Auckland ezingaphezu kwezindawo ze-20.
Ungaletha ibhayisekili lakho uqobo, futhi uqashe nebhayisekili kwamanye amadolobha amakhulu.
I-Auckland, iWellington neChristchurch banezindawo ezikhethekile zokuphinda bahlangane ngamabhayisekili asebekhulile.
Kufanele ugqoke isigqoko lapho ugibela; ngaphandle kwalokho uzohlawuliswa lapho. Lapho uqasha ibhayisekili kufanele unikezwe isigqoko.
Amabhasi ayindlela eshibhile futhi enobungozi yemvelo yokufika eNew Zealand; noma kunjalo, izinsiza ngisho naphakathi kwamadolobha amakhulu zivame ukuba kanye ngosuku. Imigwaqo eminingi eNew Zealand imincane impela futhi inomoya futhi ukuhamba ibanga elide ngebhasi kungaba yindlela ephephile neqabulayo yokuhamba.
Ungafinyelela okuningi kokubuka kweNew Zealand ngemoto ejwayelekile, enamasondo amabili noma i-camper van. Umthamo wethrafikhi imvamisa uphansi kanti abashayeli bavame ukuba nomusa.
Ukushayela kwetrafikhi ngakwesokunxele eNew Zealand.
Izintaba, amachibi kanye namaqhwa
Kungashiwo ukuthi eNew Zealand yidolobhana emaphandleni leyo ebabazekayo, futhi mhlawumbe ayibi kangako kuneSouthern Alps yeSouth Island. Ezweni laseMackenzie laseCanterbury, iziqongo ezigcwele iqhwa ezigcwele ngaphezu kwamachibi agwebayo zinikeze ugqozi kwabaningi eposini. Emaphakathi kwesibalo esiphakeme kunazo zonke ezweni, i-Aoraki Mount Cook. Amachibi nezintaba ziyaqhubeka ngaseningizimu, iba indawo enhle yasemuva emadolobheni aseWanaka, eQueenstown kanye
Enye indawo lapho izintaba zihlangana khona namanzi ngendlela ehlaba umxhwele yiFiordland National Park lapho kuphakama khona izintaba ezinamahlathi aminyene ukusuka olwandle. Indawo etholakala kalula, futhi enhle kakhulu, iMilford Sound. Umgwaqo onawo uyamangaza futhi ukubukwa kwawo kufinyelela kakhulu lapho ufika.
Izinguzunga zeqhwa kungenzeka zingabi yinto yokuqala efika engqondweni lapho ucabanga ngesiqhingi saseNingizimu Pacific, kodwa iNew Zealand ineziningana. Okuphawuleka kakhulu yizinguzunga zeqhwa zeFox noFranz Josef eWestland National Park. Lezi zinguzunga zeqhwa azihlukile ngendlela ezisondele kakhulu ekufikeni kolwandle futhi zisekelwa inani elikhulu lezulu elehla ogwini olusentshonalanga lwaseNew Zealand.
INew Zealand iyi-hotspot yokwakheka komhlaba futhi inezintaba-mlilo eziningi ezomile nezisebenzayo, amageyisi neziphethu ezishisayo. Indawo engcono yokuqala iRotorua, lapho iphunga lesibabule likwazisa ukuthi useduze nesenzo. Indawo yasemaphandleni ezungezile inamapaki amaningi anamanzi agcwele iziphethu nokushisa okushisayo, futhi iMount Tarawera, indawo okukhona kuyo ukuqhuma okudumile kweNew Zealand, ibanga nje elifushane.
INingizimu yeRotorua yiTaupo neLake Taupo, eyakhiwa lapho kuqhuma ukuqhuma kwezintaba-mlilo ezinkulungwaneni zeminyaka edlule. Ngaphaya kweLake Taupo kuneTongariro National Park, ephethwe yizintaba-mlilo zayo ezintathu, iThongariro, i-Ngauruhoe neRuapheu. Zonke lezi zintaba zintathu zisasebenza (iRuapehu yagcina ukuqhuma ku-2007) kanti iRuapehu inechibi lomfula elingabukwa kancane nje ngokuhamba ngezinyawo. INauruhoe idume ngokugcwalisa njengo Mt. Bahlulele Lord of the Rings trilogy.
INyakatho yeRotorua yiWhitakatane, kanye nokuvakashela eWhite Island, isiqhingi sentaba-mlilo esivele ogwini. Lesi siqhingi singumhlaba ohlukile nomusi waso wentuthu, ichibi eliluhlaza okotshani kanye nezihlahla zePohutukawa zinamathela ebuntwini obuntekenteke edwaleni lentaba-mlilo.
Njengoba isekude kangako, iNew Zealand inezitshalo nezilwane ezihlukile kakhulu. Enye yezinto ezihlaba umxhwele kakhulu isihlahla se-kauri, esinye sezihlahla ezinkulu kakhulu emhlabeni. Ambalwa kule mikhulu asele (umphumela wokunganaki), kepha ukuvakashela kwiHlathi laseWaipoua eNorthland kuzokwazi ukubabaza.
Amabhishi aseSouth Island, ikakhulukazi i-The Catlins kanye ne-Otago Peninsula, ayizindawo ezinhle zokubona izilwane zasolwandle ezinjengamapengu, amasondo namabhubesi olwandle endaweni yazo yemvelo. IPenula ye-Otago nayo yaziwa nge-albatross colony yayo.
Ngenkathi emaphandleni kuyinto ehehayo iNew Zealand, kuzodingeka uvakashele amadolobha ambalwa ukubona iqiniso lalokho. I-Auckland ingumuzi omnandi onezifunda zawo ezinamanzi afana neViaduct Harbor ne-Mission Bay, izintaba-mlilo ezindala (Mt Mt. Kanye ne-One Tree Hill) Ubuciko obuthakazelisa ngokwengeziwe nomnyuziyamu weTe Papa ungatholakala eWellington, inhloko-dolobha yezwe. INapier kufanelekile ukuyimisa ngenxa ye-Art Deco CBD yayo, kanti uChristchurch wayethokozela umlingisi wayo wesiNgisi ogwini loMfula Avon ngaphambi kokubhujiswa komhlaba nokuzamazama komhlaba. UNelson yinhlokodolobha yezobuciko, yezokubumba, eyokubumba nezikebhe futhi okuwukuphela kwesitayela sombhishobhi saseYurophu esishiywe simi (esibizwa nge- “Christ Church Cathedral”); akulimazi ukuthi uNelson unamabhishi amakhulu futhi uzungezwe amapaki amathathu ezwe.
IsiNgisi, isiMāori noLimi Lwezandla lwaseNew Zealand yizilimi ezisemthethweni zaseNew Zealand. IsiNgisi sikhona emhlabeni wonke futhi sibhalwe ngokusemthethweni isipelingi seCommonwealth (eBrithani).
Imali esetshenziswe eNew Zealand yiNew Zealand Dollar (NZD). Ezinye imali azemukelwa kalula ngaphandle kwamanye amahhotela amakhulu nakumabhange kulo lonke elaseNew Zealand. Ukuzama ukwenza ukuthengiselana ngemali yangaphandle kungahle kuholele ukuthambekiswa kwenhliziyo okulula.
Ngosuku lukaKhisimusi, uLwesihlanu omuhle, iSonto lePhasika, nangaphambi kwe-1PM ngo-Anzac Day (25 Ephreli), wonke amabhizinisi abalulekile kodwa awajwayelekile kufanele avalwe. Ngenkathi abathengisi abaningi beqa lo mthetho, lolu daba selubukeziwe iminyaka eminingi nguhulumeni. Uma useNew Zealand ngolunye lwalezi zinsuku, qiniseka ukuthi uhlangabezana nazo zonke izidingo zakho ngaphambi kosuku.
AbaseNew Zealand baphakathi kwabasebenzisi abaphezulu kakhulu bensiza yamabhange kagesi emhlabeni. Imishini ye-automatic teller (ATMs), edume ngokuthi "umgodi osodongeni ', iyatholakala cishe kuwo wonke amadolobha, ngisho nalezo ezingenabhange.
Ukuthi uzodlani eNew Zealand
INew Zealand inamasiko e-cafe ehlukile, futhi ezinye zazo zinhle kakhulu emhlabeni. Amakhekhe avame ukuba nokudla okungcono kakhulu, akhonze okuthile kusuka ku-muffin kuya ekudleni okugcwele
Ukuphuza ini e-New Zealand
Inombolo yocingo ephuthumayo eNew Zealand yi-111.
I-ambulensi, imililo, amaphoyisa, i-Coast Guard kanye neMarine kanye ne-Mountain Rescue konke kungathintwa ngokushesha ngalena, MAHHALA, inombolo ephuthumayo kuphela.
Le nombolo (noma i-112 noma i-911) nayo iyasebenza kusuka kuselula - noma ngabe kungekho sikweletu esikhona futhi noma ngabe alikho i-SIM khadi!
Isimo sezulu esibi siyingozi yemvelo ejwayelekile kakhulu ehlangabezana nayo eNew Zealand. Yize iNew Zealand ingagxili ekushayweni okuqondile kweziphepho zasezindaweni ezishisayo, izinhlelo zezulu ezinesivunguvungu, ezivela ezindaweni ezishisayo nezineziqhingi, zingadabula iNew Zealand ngezikhathi ezahlukahlukene zonyaka.
Kukhona ezinye izingozi zemvelo ongahlangana nazo, noma kungaphezu kwalokho:
Ukuzamazama komhlaba okunamandla- i-New Zealand, ngokuba yingxenye yePacific Ring of Fire, ihlala izinkanyezi ngomngcele wepulethi ye-tectonic futhi ihlangabezana nezinombolo ezinkulu (cishe nge-14,000 / ngonyaka) yokuzamazama komhlaba okuncane minyaka yonke, ambalwa (cishe nge-200 / ngonyaka) ayabonakala futhi ngezikhathi ezithile eyodwa idala umonakalo futhi kwesinye isikhathi ilahlekelwe impilo.
Ukuqhuma kwentaba-mlilo- INew Zealand inezintaba-mlilo eziningi ezibalwa njengezisebenzayo noma ezingashisi. Umsebenzi we-volcanic ubhekwe yi-GeoNet.
Cishe azikho izilwane ezinobuthi noma eziyingozi kakhulu. I-katipo ne-redback ukuphela kokulimala kwezigcawu ezimbili eziyizidlakudla ezivela ezinhlotsheni zombili kunqabile. Ukuphendula okunzima akujwayelekile futhi akunakwenzeka ukuthi kukhule esikhathini esingaphansi kwamahora amathathu, noma kufanele ngaso sonke isikhathi ucele usizo esibhedlela esiseduze, esikhungweni sezokwelapha, noma kudokotela. Isicabucabu esinezimpawu ezimhlophe singakhipha nokulimala okubuhlungu kepha akubhekwe njengokuyingozi kubantu. Azikho izilwane ezidla izinyamazane ezinkulu ezikhona futhi azikho izidalwa ezinkulu ezidliwayo. Izinhlobo ezithile zeWeta (isinambuzane esibukeka kancane njengentethe enkulu noma ikhilikithi) singaletha ukuluma okulimazayo kepha okungenangozi.
Ukusatshalaliswa ngocingo okuhamba phambili kutholakala kuphela ezindaweni ezisedolobheni kuphela. Indawo yezintaba isho ukuthi, ngaphandle kwalezi zindawo zasemadolobheni, futhi ikakhulukazi kude nohlelo lomgwaqo omkhulu, ukumboza kunomgodi omkhulu ofile.
Musa ukuthembela kumaselula ezindaweni ezinamagquma noma ezintabeni - ikakhulukazi eSouth Island.